विशेष समाचार Archives - Page 10 of 10 - सुदूर नेपाल
अचम्म ! विवाह गरेको केहि मिनेटमै एक जोडीले गर्यो डिभोर्स
काठमाडौं । कुवेतमा एउटा जोडी विवाह गरेको तीन मिनेटमै छुट्टिएको छ । यो विवाह कुवेतको इतिहासमा नै सबैभन्दा कम समयको भएको बताइएको छ । डेली मेलका अनुसार अदालतमा विवाहको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर निक्लनेबित्तिकै बेहुलीले डिभोर्स गरेकी हुन् । अदालतमा जाँदै गर्दा चिप्लिएपछि आफूलाई ‘बेवकुफ’ भन्दै जिस्काएपछि बेहुली रिसले चुर हुँदै न्यायाधीशसँग वैवाहिक सम्झौता खारेज गर्न माग गरेकी हुन् । सामाजिक सञ्जालमा ती पुरुषले महिलाको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याएको भन्दै महिलाको समर्थनमा
सेयर गरौ :गीत बन्द होइन, भ्रस्टाचार बन्द गर
चर्चित लोक गायक पशुपति शर्माको गीत ‘लुट्न सके लुट कान्छा, लुट्न सके लुट, अरु देशमा पाइँदैन, नेपालमै हो छुट’ लाई सरकारले युट्युबबाट हटाउन बाध्य परिएपछि युवाहरुले गीतलाई माइतीघरमा सार्वजनिक रुपमा बजाएर विरोध जनाएका छन्। शीरमा पम्प्लेट लगाएर युवाहरुले नारा लगाउँदै नाँचगान गरिरहेका छन्। साथै उनीहरुले सरकारविरुद्ध नारा जुलुस समेत गरिरहेका छन्। उनीहरुले पशुपति शर्माको गीतजिन्दावाद’ भन्दै बन्द गर्न नहुन माग गरेका छन्। गायक पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट कान्छ…’ गीत
सेयर गरौ : अन्तत पशुपती शर्माको गीत युट्युबबाट हटाइयो,आखिर किन ?
Dinesh khaptadi February 17, 2019 0
पछिल्लो समय केहि दिन देखि युटुबमा भाइरल देखिएको गीत प्रधानमन्त्री देखि राष्ट्र्रपति कार्यालय सम्म विभिन्न गतिबिधिलाई व्यंग्यात्मक तरिकाले प्रस्तूत गरिएको पछिल्लो समय निकै चर्चामा आएको गीत लुट्न सके लुट’भर्खरै युटुबबाट हटाईएको छ। उक्त गीत पशुपति शर्माले आफ्नो सामाजिक संजालमा स्पष्टीकरण सहित हटाएका छन भने गीत फेरी बजारमा आउने उनले आफ्नो सामाजिक संजालमा लेखेका छन।उनि भन्छन’गीतका केहि शब्दले मेरो सुभाचिन्तकहरुको मन दुख्यो अब दुखाउन चाहन्न’।यस्तो छ उनको फेसबुक स्टाटस आदरणीय श्रोता
Dinesh khaptadi February 13, 2019 0
काठमाडौं । सरकारले भोलीबाट ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’को औपचारिक सुरुवात गर्ने भएको छ । उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको जानकारी गराएको हो । उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत्मा आन्तरिक लगानी जुटाउन तथा मुलुकभित्रै छरिएर रहेको पूँजी परिचालन गर्न यो कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको बताउनुभयो । कार्यक्रमको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुनेछ । ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ भन्ने सरकारको सोचअनुसार करिब ३ हजार
गाडीमा काठमाडौं पुर्‍याउने वाइबाको यसरि भो निधन
त्रिभुवन राजपथ निर्माण हुनुअघि भीमफेदीबाट गाडी बोकेर काठमाडौं पुर्‍याउनेमध्येका एक जुक्तबहादुर वाइबाको निधन भएको छ । मकवानपुरको भीमफेदीबाट गाडी बोकेर काठमाडौं लगिँदै र गाडी बोक्नेमध्येका एक थाहा नगरपालिका-५ तसरका ९३ वर्षीय जुक्तबहादुर वाइबा । दमका बिरामी ९३ वर्षीय वाइबाको सोमबार बिहान थाहा नगरपालिका ५ तसरस्थित घरमा निधन भएको हो । उनलाई उपचार गर्न माघ १० मा काठमाडौं लगिएको थियो । उपचारपछि शनिबार घर ल्याइएको थियो । ‘दमको रोगी हुनुहुन्थ्यो, कम भयो भनेर काठमाडौंबाट ल्याएको तीन
रबि लामिछानेको सर्पोटलागि यति ठूलो खुसिको खबर
काठमाडौं । बेलायतमा बस्दै आएकी चर्चित सामाजिक अभियानता इशा गुरुङ्को नेतृत्वमा २४ लाख १ सय रुपैया संकलन भएको छ । चर्चित संचारकर्मी रबि लामीछानेको नेतृत्व बन्दै गरेको रासकोट सामुदायिक अस्पताललागि गुरुङको नेतृत्वमा अहोरात्र खटिएर यति ठुलो रक़म संकलन गर्न सफल हुनुभएको हो । लगभग तिन करोड लगानीमा बन्दै गरेको हस्पिटल कर्णाली जनताकालागि मात्रै नभएर नेपालमै एक नमुना हस्पिटलको रुपले लिइएको छ । गरिव जनता समयमै उपचार नपाएर अकालमै मृत्यु को
क्षमता कि भाग्यले चम्किए अशाेक दर्जी ? भिडियो
फरक पोस्ट : भाइरल ब्याई अशोक दर्जी पछिल्लो केसी समयदेखि चर्चाको मुख्य पत्र बनेका छन् । बिशेष गरेर सोसल मिडियाहरुले आफ्नो अनलाइनमा भ्युर बढाउन, युट्युब च्यानलमा सस्क्राइब बढाउन र फेसबुक पेजमा लाइक बढाउनको लागि पनि यो बिधि अपनाईरहेका छन् । यसको अर्थ यो होइन को अशोक दर्जिमा क्षमता छैन । अशोक दर्जी सानो उमेर देखि गीत गाउदै हिड्ने बालक हुन् । सडक सडकमा गीत गाउने र पैसा कमाउने गरेका उनको